Mohamed Rahin – Page 45 – Muslim Book
မလေးရှား၏ ပါလက်စတိုင်းသံရုံး ဂျော်ဒန်တွင်ဖွင့်မည်ဟု ဒေါက်တာမဟာသီပြော
Mohamed Rahin | October 27, 2019
မလေးရှားနိုင်ငံက ပါလက်စတိုင်းကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်းသံရုံးကို ဂျော်ဒန်တွင်ဖွင့်လှစ်၍ ပ်လက်စတိုင်းပြည်သူများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အထောက်အကူများ ပေးမည်ဟု မလေးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမဟာသီမုဟမ္မဒ်က ပြောကြားသည်။ ဂျေရုစလင်မ်တွင် သံရုံးပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်သည့် နုိင်ငံများနှင့် ထိုသို့ပြောင်းဖွင့်ရန် ချင့်ချိန်နေသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန် မဟာသီက သတိပေးလိုက်သည်။ စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်က ကုလအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းတွင် ကရ်ှမီးယားကို အိန္ဒိယကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ကရ်ှမီးယားပြည်သူများနှင့်အတူ
မိဘမြားကှယျလှနျသှားပွီးနောကျ ပွုလုပျရမညျ့ ဝတ်တရားမြားမှာ (၁) ၎င်းငျးတို့အား အပွဈမှ ခမျြးသာခှငျ့ရရှိစရေေးနှငျ့ ရဟျမသျရရှိစရေေးအတှကျ ဆုပနျပေးခွငျး၊ နဖိလျအဗောဒသျနှငျ့ စှာဒျကဟျ အလှူဒါနမြား၏ ကုသိုလျကိုပို့ပေးခွငျးမြား ပွုလုပျပေးရမညျ။ (၂) ၎င်းငျးတို့၏ အပေါငျးအသငျးမြား၊ မိတျဆှမြေားကို ပစ်စညျးဖွငျ့သျောလညျးကောငျး၊ ကိုယျအားဖွငျ့သျောလညျးကောငျး၊ ဆကျဆံရေးအားဖွငျ့သျောလညျးကောငျး ကောငျးမှနျစှာ ပွုမူဆကျဆံရမညျ။ (၃) ၎င်းငျးတို့အပျေါ၌ တငျရှိနသေောကွှေးမွီးမြား ဆပျပေးရမညျ။ (၄)
သေဆုံးကွယ်လွန်သူအား ကဗရ်ထဲ ထည့်ပြီးနောက် မြေကြီး၃ဆုပ်ထည့်ရင်း ရွတ်ဖတ်ရသည့် ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ ဆုမွန်ဒိုအာနှင့်အဓိပ္ပာယ်များ……..
Mohamed Rahin | October 25, 2019
သေဆုံးကွယ်လွန်သူအား ကဗရ်ထဲ ထည့်ပြီးနောက် မြေကြီး၃ဆုပ်ထည့်ရင်း ရွတ်ဖတ်ရသည့် ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ ဆုမွန်ဒိုအာနှင့်အဓိပ္ပာယ်များ…….. ဂျနာဇာပို့တဲ့သည့်အချိန်၊မိုင်ယသ်ကို တွင်းထဲချပြီး၊မြေဖို့ရင်၊ ဂျနာဇာလိုက်ပို့တဲ့သူတွေက၊ မြေကြီးသုံးဆုပ်ထည့်ပေးရတယ်၊ ပထမတဆုပ်မှာ- ” မင်န့်ဟာ ခလက်က်နား ကွန်မ် ” အဓိပ္ပါယ်၊ [ထိုမြေကြီးကနေငါ အသျှင်၊ အသင်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ဒုတိယတဆုပ်မှာ- ” ဝဖီးဟာ နုအီးဒုကွန်မ် ” အဓိပ္ပါယ်၊ [ထိုမြေကြီးထဲကို၊ငါအသျှင်အသင်တို့ကို၊
ကမ္ဘာပေါ်မှာတယောက်တည်း နေလာခဲ့ရတဲ့တမန်တော် အာဒမ်.. (အလိုင်ဟစ္စလာမ်)ကိုသတိရလိုက်ပါ… သွေးရင်းသားရင်းတွေကြောင့် … နာကျင်ခံစားရတဲ့အခါမှာ.. ညီအကိုအရင်းတွေရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ တမန်တော် ယူစွဖ်.. (အလိုင်ဟစ္စလာမ်)ကိုသတိရလိုက်ပါ.. လွတ်လမ်းမရှိတဲ့..အခက်ခဲတွေ.. ပြသနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ…. ငါးကြီးရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ တမန်တော် ယူနွတ်စ်(အလိုင်ဟစ္စလာမ်) ကိုသတိရလိုကပြါ… အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေလုပ်နေရတယ်လို့ ထင်မိတဲ့အခါမှာ ဘာမှစောဒကမတက်ဘဲ အလာဟ်အမိန့်နာခံပီး သင်္ဘောကြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တမန်တော် နှုးရ်ဟ် (အလိုင်ဟစ္စလာမ်)ကိုသတိရလိုက်ပါ..
Mohamed Rahin | October 23, 2019
အမျိုးသမီးတွေဘာကြောင့် ငိုသလဲ? သားငယ်လေးတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ မိခင်ကို မေးတယ်…” မေမေ ဘာကြောင့် ငိုနေသလဲ? ” မိခင်က ပြန်ဖြေတယ်…” မေမေက မိန်းမသားမို့ပေါ့ကွယ် ”သားငယ်လေးက ပြန်ပြောတယ်….” သားနားမလည်ဘူး မေမေ ” မိခင်က ပြုံးလိုက်ပြီး သူမရဲ့သားလေးကို ဖက်ခါ ပြောလိုက်တာက… ” သား ဘယ်တော့မှ နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်
ကျနော့် အတွက် ဇိမ်ခံကားတွေ ၊ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေ မလိုပါဘူး ၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခွင့်ရရင်ပဲ ကျေနပ်နေပါပြီ” #မာနေး
တစ်ခါက လီဗာပူး နည်းပြ ယာဂန် ကလော့ပ်က သူ့အနေနဲ့ အခုလို အဆင့်မျိုးအထိ ရောက်ရှိအောင် အရမ်းကို ရုန်းကန်ခဲ့တာတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပြီး ၊ အဲဒီလို ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဒုက္ခတွင်းကြီးထဲ ဆင်းရသလို လို့ ထင်ခဲ့မိပေမယ့် ၊ မာနေး ၊ ဆာလတ် ၊ ဖာမင်နို တို့
ကိုယ်တော်သခင်(ဆွ)က ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာ ဂျမာအသ်နဲ့နမားဇ်ဖတ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ
ကိုယ်တော်သခင်(ဆွ)က ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာ ဂျမာအသ်နဲ့နမားဇ်ဖတ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ စကားရပ်နဲ့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အပြင် လုပ်ရပ်နဲ့လည်း သက်သေပြသခဲ့ပါတယ် စကားရပ်နဲ့ ဘယ်လိုမိန့်ကြားခဲ့တာလဲဆိုရင် အလိုသဘောမှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာ ဂျမာအသ်နဲ့ တကွ နမားဇ် ဝတ်မပြုသူရဲ့အိမ်ကို ငါကိုယ်တော် မီးရှို့ပစ်ချင်တယ် ဟူ၍ဖြစ်ပြီး လုပ်ရပ်နဲ့ ဘယ်ပုံစံသက်သေပြခဲ့တာလဲဆိုရင် အလွန်နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း ကိုယ်တော်သခင်(ဆွ)ဟာ ဆွဟာဗီနှစ်ပါးရဲ့ ပခုံးထက်မှာ လက်ကိုတင်ပြီး
” ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်မိန်ကလေးမာဆိုမာ “
Mohamed Rahin | October 22, 2019
သူမ၏အမည်မှာ (Masooma Rajput)မာဆိုမာဖြစ်ပြီး (Quetta) ကွတ်တာ၏သမီးတဦးဖြစ်သည်။ သူမသည်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဘိုလိုချီစတန်ပြည်နယ်မှဖြစ်၍ ဂျာမနီနိုင်ငံနိုင်ငံရှိ ဟိုက်ဒရာဘတ်တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်၌ ကင်ဆာရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုလုပ်ရာတွင် ပထမဆုံး ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံမှထူးချွန်သူအမျိုးသမီးအဖြစ် မာစတာဒီဂရီ ဆုရရှိခဲ့သူပင်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရှိ ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့၌ လေ့လာမှုပြုပြီး ပြန်လည်လက်တွေ့အသုံးချသည့်ကာလတွင် အမြဲတစေဆုရရှိခဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ်တက္ကသိုလ်သို့ ထူးချွန်စွာ ပညာသင်ယူခွင် စကော်လာဆုရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူမသည်စာနယ်ဇင်းဟောပြောပွဲတွင် သူမ၏ကိုယ်တွေ့
ဗလီကိုမတော်တဆမီးသတ်ပိုက်ဖြင့်ထိုးခဲ့မှု ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့်ရဲချုပ် လာရောက်တောင်းပန်
ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က အပြောရောင်ဆေးရည်ပါ ဖိအားပြင်းရေပိုက်ဖြင့် ကော်လွန်းဗလီအဝင်ပေါက်ကို ထိုးပစ်ခဲ့မှုဖြစ်ခဲ့သည့်အပေါ် ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့်ရဲချုပ်တို့က တနင်္လာနေ့တွင် အဆိုပါ ဗလီသို့လာရောက်လည်ပတ်၍ တောင်းပန်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူများရှိမနေပဲ ထိုသို့ရေပိုက်ဖြင့်ထိုးခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒေသခံမွတ်စလင်များနှင့် ဆန္ဒပြသူများ ဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။ “ဒီဗလီဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတပဲ” ဟုဗလီ၌ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်သူများနှင့်တောင်အာရှနိုင်ငံသားများအတွက်စကားပြန် လုပ်ပေးနေသည့် Waqar Haider ကပြောကြားသည်။ တောင်အာရှသားများက ဟောင်ကောင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူများနှင့်ဟောင်ကောင်လိုလားသူများအထဲ မည်သည့်အုပ်စုတွင်မှ
ဤကလီမာဟ်တော်၏ အကျိူးထူး ၇ချက်
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဟဒီးဆ်တော် တစ်ပုဒ်
ညအိပ်ယာမ၀င်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ” နမာဇ်”ဖတ်ပုံကွဲလွဲခြားနားသော အချက်များ